In kastoo dib markii la bilaabay ee iPhone 4s Apple Inc. ku xaqiijiyey in xalka ugu wanaagsan ee 8MP la soo bandhigo si user ah Khasab ma aha in ay isticmaalaan cams dibadda si sawirro loo qaado. Si kastaba ha ahaatee dadka isticmaala qaar ka mid ah ayaa weli waxaa ka mid ah aragtida ah in ay cams dibadda ugu fiican waxaa loogu talagalay in ay masawirada iyo jaraa, si ay u isticmaalaan cams kuwaas oo si aad u hubiso in natiijada ka xoogbadan, si cams iPhone yihiin gaadhin. Cams way la kaydinta card SD iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in tutorial tani waa dhan oo ku saabsan sawiro ka camera gudbaayo iPhone.
Qaybta 1aad: Sida loo sawiro ka camera wareejiyo iPhone isticmaalaya adabtarada USB ah
Qeybta 2: Haddii aanu jirin adabtarada USB, sida ay u gudbiyaan sawiro in computer marka hore
Qeybta 3: FAQ: ma jiro, meel ku filan u sawiro ka camera
Qeybta 4: dheeraad ah muuqaalada
Geedi socodka waa mid aad u fudud oo si sahlan tahay in la raaco iyo user xaqa u baahan yahay in la raaco talaabooyin yar oo sahlan si aad u hubiso in natiijada ugu wanaagsan waxaa lagu helaa arrintan la xiriira.
1. Tallaabada cable kamarada USB waa in lagugu xiro iPhone oo isticmaalaya cable USB Hillaaca aad u bilowdo hawsha.
Tallaabada 2.Beerta iPhone photos app waa in markaas la bilaabay si hanaanka wareejinta waxaa lagu bilaabi karaa oo waa qasabno kaliya ka fog dhowr. Button dejinta waa in ay riixi arjiga.
Tallaabada photos 3.Beerta shaashadda soo socda waa in la soo xulay si ay u hubiyaan in kaliya kuwa laga keeno ee loo baahan yahay. Button dejinta waa in la riixi arrintan la xiriira.
Tallaabada 4.a folder cusub la abuuri doono software ah smart macruufka oo la hubiyo in ay sawiro cusub oo aadna ku badbaaddeen "sawiro iyo videos keeno" Chine in ay ka dhigi doonaa. Codsiga caqli badan ayaa sidoo kale ku weydiin doona user ay u ilaaliso ama tirtirto ah sawiro laga keeno iyo user u dooran karaan ikhtiyaarka ugu habboon baahidooda iyo geeddi-socodka ayaa ku dhameysatay kaalinta sidoo.
Qeybta 2: Haddii aanu jirin adabtarada USB, sida loo sawiro in computer wareejiyo marka hore
Waxaa jira baaraandegidda codsiyada sawir badan oo loo isticmaali karo si loo hubiyo in photos waxaa loo wareejiyaa PC ama Mac in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. In talaabooyinka xiga user ka mid dooni inuu isticmaali qabashada image si ay u gudbiyaan files inay hubiyaan in habka uu noqdo mid fudud oo ka kaaftoomi lacag la'aan ah ka dhigi kara. Waxa kale oo loo arki karin, oo ah geedi socod in loo isticmaalaa in lagu sawiro in computer gudbin doontaa qalab kasta oo Qabsashada image.
Tallaabada 1.Once camera uu xiriir la MAC ama PC software ah ku rakiban loo yaqaan qabashada image lagu ogaan doono qalabka sida iyo sidoo kale warbaahinta cusub ee la heli karo :.
Tallaabada 2.On geeska kore ee midigta user ay u baahan tahay in ay doortaan sawirada dejinta inay isticmaalaan uu software in buuxa.
Tallaabada 3.In mid habka talaabadan user karo si fudud sawiro ka camera wareejiyo PC ama Mac aan ka kaaftoomi kasta.
. kasta oo camera kasta digital yimaado la CD software ama dhisay version in la geliyo kombuyuutarka marka camera waxaa ku xirnayn user xaq u baahan yahay in la hubiyo in hagaha waxbarashada Timid kamarad si fiican loo akhriyo iyo tallaabooyin la raacay si ay u gudbiyaan sawiro ka camera in kombiyuutarka. Marka la sameeyo Lugood ama software kasta oo ku salaysan arrimo waxaa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan sawiro si ay iPhone.
Mararka user ayaa wajahaya qalad halka wareejinta faylasha ay u iPhone in meel la heli karo oo aan ku filayn oo sidaas daraaddeed files lama wareejiyo. Waxaa lagu xalin karaa tirada barnaamijyada software laakiin mid ka mid ah ugu fiican in loo soo bandhigay in tutorial kanna waa SafeEraser Wondershare .
Wondershare SafeEraser waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira taas oo ka dhigaysa hubiyo in aan kaliya files junk ka nadiifiyaa yihiin laakiin user sidoo kale waa inay awoodaan inay akhriyaan sharaxaad ka hor la tirtiro file si incase jirto wax dhibaato ah ama haddii user ee ma doonayo si file tirtiray markaas waxa ay noqon kartaa laga qaban ama laga saaro liiska faylasha junk. Wondershare SafeEraser waxay leedahay faa'iidooyin badan marka ay timaado noqon isticmaalka iyo qaar ka mid ah la tarin karto kaliya click hal si loo hubiyo in user weli ka kaaftoomi halaajiya oo arrintan la xiriira oo farabadan ee qasabno marna ku lug. Si aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah barnaamijka user u leeyahay in la raaco habka uu soo sheegnay in tutorial si ay u hubiyaan in natiijooyinka laga helo hab arrintaasna waa u fududahay in la raaco oo uu leeyahay dhibaatooyin aysan ku luglaheyn.
Tallaabada 1.After degsado barnaamijka ka http://www.wondershare.com/iphone-data-eraser/ user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in dardar la raacay oo mar rakibo la soo dhameeyay ka dibna iPhone ku xiran tahay in kombiyuutarka taasoo ku qasbi doonaa barnaamijka si loo ogaado qalabka iyo abuurtaan.
talaabo 2.On uu furmo suuqa hoose, riix 1-Guji button Nadiifinta si loo hubiyo in files junk ku yaalaan qalabka iyo dadku ku badan yahay ee foomka of liiska. Ka dib marka aad guji Nadiifinta 1-Click, scan ka bilaabo si toos ah.
Tallaabada 3.All files junk doono ka dibna waxaa laga kuwaas oo loo arki karaa in tiradaasi hoos ku qoran.
Tallaabada 4.Once liiska la soo dhameeyay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button Nadiifinta la weeraray si aad u dhamayso ee buuxa.
Qeybta 4: muuqaalada dheeraad ah
Software 1. toos ah ogaadaa files junk in lagu nool yihiin in qalabka iyo wax Faydi mar oo dhan si loo hubiyo in meel bannaan oo dheeraad ah oo degan waxaa la sii daayey ka.
2.It waa software kaliya in hubiyaa in faahfaahin shayga ayaa sidoo kale arki karo in ay user si loo hubiyo in faylka la saaro liiska file junk haddii ay tahay isticmaalka.
3.Beerta user sidoo kale hubin karaa in in muuqaalada kale ee software-ka waxaa loo isticmaalaa oo sii xogta sida ay, laakiin waxaa la cadaadin baaxadda si loo badbaadiyo bannaan ee.
Software 4.The sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si ay u tirtiri soo baxay oo qalab ah oo wax yaabahan cabsi badan si loo casriyeeyo firmware ee telefoonka.
> Resource > iPhone > Sida loo sawiro ka camera wareejiyo iPhone